Shacabka Xaafada Israac ee Magaalada Garoowe oo ka cabanaya qashinka la dhigo iyagoo fariina u diray maamulka degmada. – Radio Daljir
Shacabka Xaafada Israac ee Magaalada Garoowe oo ka cabanaya qashinka la dhigo iyagoo fariina u diray maamulka degmada.
Febraayo 15, 2019 4:17 b 0
Dowladda hoose ee degmada Garoowe ayaa howlgal nadaafada ah ka bilowday Toga mara xaafada Israac ee Magaalada Garoowe kaas oo qashin laga buuxiyey.
Shacabka iyo Maamulka Xaafada ayaa ka codsaday Dowladda Hoose inay wax kala qabato qashinka faraha badan ee la dhigay Toga islamarkaana ay ka hor tagto dadka qashinka kusoo shuba Toga.
Xoghayaha Dowladda Hoose ee ee caasimadda Maxamuud Cali Guray ayaa sheegay in Toga loo samayn doono waardiye iyo goob qashinka la dhigo isagoo uga digay dadka qashinka dhiga toga inay talabo ka qaadi doonaan.
Taliye Muxiyadiin: ”Lama kirayn karo guri Bosaso iyadoon Dowladda Hoose la ogeysiin” (dhegays | daawo)
Maamulka iyo shacabka Degmada Buurtinle oo isku tashi ku dhisaya laamiga Dhex maray Degmadaasi. dhegayso)